Ny kaontin'ny Banky Offshore dia manokatra sarany vaovao
Fandaniam-bola amin'ny banky Offshore
Ny ankamaroan'ny olona dia manorina kaonty banky offshore ho an'ny fiarovana amin'ny alàlan'ny lalàna sy ny fiainana manokana. Tsy mividy biriky ianao satria te hanao biriky. Mividy iray ianao satria mila lavaka. Noho izany, tsy mila manontany fotsiny isika hoe: "Inona no lanjan'ny fametrahana sy fitazonana ny kaonty any ampovoany?" Mila manontany ihany koa isika hoe: "Inona no sarany, fiarovana sy tombontsoa ara-bola?"
Ka noho ny fiarovana ny fananana sy ny tsiambaratelo ara-bola, ny fitsipika voalohany dia ny tsy hanokatra kaonty amin'ny anaranao manokana. Sokafy amin'ny anaran'ny orinasa any ivelany, LLC na fifampatokisana. Aoka hatao hoe Pat Smith ny anaranao. Mandray vola avy any amin'ny banky ianao eny amin'ny arabe mankany amin'ny kaonty izay notazonin'i "Pat Smith." Ny làlana mifindra an-tariby dia mamela firaketana maharitra fa manana kaonty ianao. Izany no antony anokafantsika amin'ny ankapobeny ny kaonty any amoron-dranomasina amin'ny anaran'ny orinasa na ny fahatokisana.
Mampitombo ny fiainan'ny fiainana izany, satria ny fifindrana an-tsokosoko dia ao anaty sy ivelan'ny hafa offshore bank ny fifanakalozana dia atao eo ambany anaran 'ny orinasa fa tsy ny olon-tsotra. Ny saram-pametrahana ho an'ny fanokafana kaonty any ivelany dia matetika eo anelanelan'ny $ 550 ka $ 1,250. Miankina amin'ny banky sy ny fahefana io. Orinasa iray any ivelany izay matetika mihazakazaka eo anelanelan'ny $ 1,685 sy $ 2,495. Noho izany, ny totalin'ny $ 2,235 dia $ 3,745 ho an'ny roa tonta.
Firy ny Banky Afrikana any?
Araka ny Quora, Misy banky 14,600 manombantombana eran'izao tontolo izao tahaka an'io fanoratana io. Na izany aza, vitsy ny banky hanokatra kaonty ho an'ireo vahiny, indrindra ireo avy any Etazonia, Angletera, Kanada na Aostralia. Ambonin'izany, misy ny karazam-pamokarana isan-karazany amin'ny asa mahagaga sy mahafa-po dia mahasosotra be. Ho voaro ve ny volanao? Afaka matoky ny banky ve ianao? Eritrereto izany. Ity no volanao. Te-hanana traikefa amin'ny banky mahafinaritra sy azo antoka avy hatrany ianao.
Maromaro ny banky tena azo antoka, banky izay manome serivisy tsara. Saingy betsaka loatra ny banky any ivelany hitadiavana ilay mety. Ny fomba tsara indrindra hitadiavana azy dia ny fanontanianao olona efa nialoha azy taloha; indrindra fa misy olona nametraka kaonty any ivelany ho an'ny olona an'arivony. Noho izany, manakarama manam-pahaizana. Mandany vola kely ny famatsiam-bola kely vao mahazo azy io amin'ny fotoana voalohany. Raha mila fampahalalana misimisy ianao dia misy laharana finday sy endrika fifampidinihana eo amin'ity efijery ity. Mivoaha ka araraoty.
Ny banky any ivelany dia mila fampiharana, noho ny zotom-po sy fitehirizana voalohany hananganana ny kaontinao. Ny fampiharana dia mazàna mahitsy. Manana ny anaranao, adiresy sy laharana an-telefaonanao. Matetika ianao dia hanome tombana kely fotsiny ny habetsaky ny tanjonao hametrahana sy hanesorana sy fampahalalana hafa.
Mazava ho azy, mila fiainana manokana ianao. Saingy tsy mila tsiambaratelo be loatra ianao ka ny olona mody ho anao dia afaka miditra ao amin'ny banky ary manala ny volanao. Noho izany, ilaina ny fahazotoana ilaina, toy ny dika mitovy amin'ny pasipaoronao, takiana volavolan-dalàna momba ny pasipaoro sy taratasy fanondroana azy. Tokony ho fantatr'izy ireo fa raha misy miantso, mailaka na mandeha amin'ny banky hangataka ny vola tena izy io. Ny fampahalalana anao dia hatao tsiambaratelo. Saingy te-handeha ho any aminao ilay vola fa tsy olona milaza azy ireo ianao. Izany no antony lehibe iray nangatahan'izy ireo ny antotan-taratasy.
Toetran'ny fitomboana ara-toekarena izy ireo rehefa mieritreritra ny bankin'izy ireo ho azo antoka sy azo antoka. Fitsipika ankapobeny izany. Noho izany, mivondrona isan-taona ny fikambanana iraisam-pirenena any Basel, Suisse hametrahana ny fenitry ny banky iraisam-pirenena. Ohatrinona ny trosa tokony ho tratry ny banky raha oharina amin'ny fananan'ny banky? Ohatrinona ny vola tokony hotehirizina? Inona avy no dingana tokony hataon'izy ireo raha te-hiala amin'ny rafi-pitondran-tena?
Ny iray amin'ireo faritry ny banky any ivelany izay malaza indrindra dia ny Nosy Cayman. Eto azonao vakiana momba ny Orinasa sy kaonty Cayman.
Noho izany, antony iray izay mitaky ny fahazotoana ilaina amin'ny banky ny hoe te-handray tsara ireo “lehilahy tsara” izy ireo ary hanohy ny “olon-dratsy.” Mety maniry ny hanana fiainana manokana ianao. Fa irinao koa ny volanao azo antoka sy azo idirana. Noho izany, tsy mila ny mpanidy iraisam-pirenena handrindrina ny banky ianao ary hanafaka ny volanao. Izany no hitranga raha nizara banky tamin'ny reincarnation Osama Bin Laden ianao. Tsy mangataka antontan-taratasy fotsiny ny mpiasan'ny banky satria maharikoriko izy ireo. Tian'izy ireo ho azo antoka ianao sy ireo mpikirakira vola hafa. Ambonin'izany, tsy te hanary ny fahazoan-dàlana amin'ny banky ry zareo amin'ny alàlan'ny fanekena ny olon-dratsy ao anaty rafitra.
Nahoana izy ireo no tsy manaiky
Ny fanaovana izany rehetra izany noho ny fahazotoana takian'ny fenitra iraisam-pirenena dia tsy maimaimpoana. Mitaky vola izany. Noho izany, izay no antony nanokafana kaonty tany am-pitan-kaonty, nitaky ny saram-pametrahana. Tsy mety hampandeha ny fahazoan-dàlana ny banky ary hanitsakitsaka ny dingam-pahavitrihana ilaina sy ny fahafantarana ny mpanjifanao (KYC). Mety hiteny ianao hoe olona tsara tarehy ianao na tsara gal. Na izany aza, tsy mahafantatra anao ny banky. Noho izany, mila ilainao izy ireo mba hanaporofoana izany.
Tsy hihilika ireo fitsipika ny banky satria miantso azy amin'ny afo mitifitra avy eo am-bavanao. Tsy hanao zavatra miavaka izy ireo satria mitsambikina miakatra toy ny rajako screeching satria lava be loatra izy ireo na mangataka fanazavana be loatra. Mpanara-maso tsy tapaka ny banky eo an-toerana. Mila ataon'izy ireo antoka fa ny banky no nanamarina ireo boaty rehetra ho an'ny fananganana kaonty tsirairay. Noho izany, aza manantena ny hanomezan'ny mason-dranomaso anao sy ny andrefana ny hanomezany anao. Izany hoe, tsy hikapoka anao amin'ny loha izy ireo satria kamo loatra ny maka pasipaoro na taratasy momba ny banky. Tsy mety hampidi-doza izy ireo raha sanatria very ny fahazoan-dàlana ho anao. Aleon'izy ireo mifindra fotsiny amin'ny mpanjifa manaraka izay miaraka amin'ilay programa.
Banky Offshore Banking
Ny saram-pikojakojana isam-bolana dia mety hihodina avy amin'ny $ 20 ka $ 100, na toy izany. Ny saram-pandefasan-tseranana dia matetika amin'ny $ 25 ka $ 75. Raha mila kaonty izay ahafahanao mampiditra vola any amin'ny tsenambola dia misy ireo andrim-panjakana ahafahanao manao varotra irery. Misy ihany koa ireo andrim-panjakana ahafahanao manana mpandraharaha vola za-draharaha manao fampiasam-bola ho anao, miaraka amin'ny fankasitrahanao. Matetika ny mpitantana vola dia mandoa ampaham-bola kely amin'ny vola tantaniny. Mazava ho azy, miovaova arakaraka ny andrim-panjakana ny karazana saram-bola sy ny vola aloa. Mety ho anatiny na ivelan'ny firesahana voalaza eto.
Samy hafa ny taham-bola nindramina, vola isam-bolana ary karazana kaonty. Ny ankamaroan'ny andrim-bola am-pianarana any ivelany dia manana salan'isa mifaninana mba hisarihana ireo mpanangona vola. Ny tahan'ny zana-bola nidina am-pivoahana dia toa avo kokoa noho ny andrim-panjakana. Ny fizotry ny fananganana ny kaonty any ivelany anao dia misy ny sarany fanodinana, ny saram-pitaterana ary ny vidin'entana kely isan-karazany. Ireo zavatra ireo dia mety hampiditra zavatra toy ny fiampangana an-tsoratra, sns. OffshoreCompany.com dia nanampy olona an'arivony hanokatra kaonty, orin'asa sy fitokisana tsy miankina. Ka alao hamonjy anay ary afaka manampy ireo zavatra ilaina ankehitriny isika.
Fantaro hoe inona no fanapahana sy banky sahaza anao. Ampiasao tsotra fotsiny ny isa na taratasy fangatahana etsy ambony ary hazavao ny zavatra ilainao.
<Ho an'ny toko 9
Ho an'ny toko 11>